अपराधीले टाउको उठाउन पाउँदैन – एसएसपी पिताम्बर अधिकारी
काठमाडौं उपत्यकामा हुने आपराधिक घटना न्युनीकरण गर्न प्रहरीले २४ सै घण्टा गस्ती गर्ने गरेको छ । तर पनि अपराध गर्नेले मौका छोपेर अपराध गर्ने गरेका छन् । काठमाडौंको तुलनामा ललितपुरमा १२ प्रतिशत मात्र अपराध हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । ललितपुर प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पिताम्बर अधिकारीसँग नारायण अधिकारीले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
ललितपुरको पछिल्लो अपराध अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौंमा हुने अपराधको १२ प्रतिशत अपराध ललितपुरमा हुन्छ । ठगी, चोरीलगायत आर्थिक पाटा जोडिएका अपराध अहिलेका प्रमुख अपराध हुन् । यौन हिंसा, झैझगडा ठूला संगठित अपराधहरु भने कम भएको हाम्रो तथ्याङ्क छ ।
काठमाडौंको जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै अपराध ललितपुरमा हुन्छ भन्नुभयो । अपराधीसम्म प्रहरी पुग्न नसकेको कि अपराध नै कम भएको हो ?
अपराध नै कम भएको हो । किन कम भएको हो भन्दा यहाँको जनसंख्या पनि कम छ । जहाँ जनसंख्या बढी हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न प्रकृतिका मान्छे हुने र अपराध पनि बढी हुने गर्छ ।
पछिल्लो समय नयाँ नयाँ प्रकृतिका अपराध देखिन्छ । अपराध गर्ने शैली फेरिएकै हो त ?
अपराध फेरिएको पक्कै हो । आपराधिक कार्यशैली को नयाँ तरिका ठगीको हो । पछिल्लो समय विभिन्न प्रलोभन देखाएर आर्थिक ठगी गर्ने देखिन्छ । समयअनुसार फरक फरक काम गरेर ठग्ने गरेको पनि देखिन्छ । अर्को भनेको पहिलाको जस्तो गुण्डागर्दी छैन । राजनीतिक अवरण तथा सामाजिक आडम्बर देखाएर अपराध गर्ने भने बढेका छन् । यो एकदमै चुनौतिपूर्ण छ ।
त्यस्तै पहिला दिउँसो चोरी हुँदैन थियो । अहिले दिउँसो चोरी हुन थालेको छ । शनिबार दिउँसोको चोरी नहुने । शुक्रबार र आइतबार कम हुने, अरु बार धेरै चोरी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा मान्छे अफिस गएको बेला पारेर चोर्न क्रम बढेको देखिन्छ ।
दशैंमा विशेष योजना बनाएर चोरी शून्य बनाउनुभयो । त्यस्तै योजना बनाएर बाह्रै महिना काम गर्दा चोरी शून्य बनाउन सकिँदैन ?
हामीले अहिले पनि योजना अनुसार नै काम गरेका छौं । महिनाभरीको अपराधको टे«न के छ ? त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं । अपराध गर्नेले दशैंलाई अवसर बनाउँछन् । त्यही अनुसार हामीले सुरक्षा योजना बनाएर काम गर्यौं । जनशक्तिको अभावले त्यो लागू हुन नसकेको हो । तर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।
ललितपुरकै कतिपय ठाउँमा चोरी भएको छ । तपाईंहरुले चोर पक्राउ गर्न नसक्नु भएको हो ?
समय लाग्ला तर अवश्य पक्राउ पर्छन् । चोरलाई एकदिन पीडितको ठाउँमा उभ्याउँछौं, ढुक्क हुनुस् ।
अर्को डरलाग्दो अपराध भनेको अपहरण गर्ने, फिरौती माग्ने पनि हो । यसको अवस्था चाहिँ के छ ?
अपहरणको घटना राजधानीमा त्यस्तो ठूलो छैन । हुन त हामीले पनि एक दुईवटा अपहरणका मुद्दा चलायौं । त्यो चाहिँ पैसा उठाउन लागि अपहरण गर्ने जस्तो देखियो । जुन हाम्रो दक्षिण सीमातिर भएको जस्तो अपहरण राजधानीमा छैन ।
प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने तरिका जति विकास हुँदै जान्छ, अपराधीले पनि विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने गर्छन् भनिन्छ । प्रविधिसँग अपराध कत्तिको जोडिन्छ ?
एकदमै जोडिन्छ । प्रविधिले जति अरु मानिसलाई फाइदा पुर्‍याएको छ, त्यति नै अपराधीलाई सहयोग पुर्‍याएको हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ब्रेक बिनाको गाडी जस्तो हुन्छ । गाडी चाहिँ तीव्र गतिमा गुड्ने बनाउने, तर ब्रेक नबनाएपछि त दुर्घटना हुन्छ नै ।
त्यसकारणले हामीले अपराध नियन्त्रण गर्न पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रविधिसँग प्रहरीको पहुँच हुनुपर्छ । हामीसँग प्रविधि एकदमै कम छ । यदि हामीसँग प्रविधि प्रचुर प्रयोग हुन सक्यो भने हाम्रो अनुसन्धानले फड्को मार्छ ।
अपराधमै जोडिएर आउँछ लागू औषधको कारोबार । ललितपुरमा चाहिँ लागू औषधको कारोबार अवस्था कस्तो छ ?
ललितपुरमा धेरै मात्रामा लागू औषध दुव्र्यवसनी छन् । लागू औषध खानकै लागि ३० तोला सुन चोरेको घटना पनि छ । ठूलो कारोबार नभएपनि ललितपुरमा लागू औषध दुव्र्यवसनी धेरै छन् ।
अपराधको अर्को डरलाग्दो रुप भनेको यौन शोषणपछिको हत्या हो । केही समयअघि ललितपुरको गुइपोखरीमा यौन सम्पर्क गरेर एक महिलाको हत्या गरी फालिएको थियो । यौनजन्य अपराधका श्रृँखला बढ्दै गएको हो ?
यौनजन्य अपराध पहिला भन्दा केही बढेको हो की भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ । गाडीहरुमा, होटलहरुमा यस्ता अपराध बढेको देखिन्छ । कानुन बलियो हुँदाहुँदै पनि अपराध बढेकाले सामाजिक परिवेशले अपराध न्युनिकरण गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
ललितपुर प्रहरीले बौद्ध गुम्बाको मूर्ति चोर्नेलाई पक्राउ गरेको थियो । मूर्तिसहित चोर समातिएपछि तपाईंलगायत केही प्रहरी पनि सम्मानित भए । त्यो घटना चाँही कस्तो थियो ?
त्यो पुराताव्तिक चोरी हो । संगठित अपराध हो । उनीहरुले मूर्ति देश बाहिर लान लागेका थिए । यो सबै सूचना आएपछि हामीले दुई महिना लगाएर मूर्ति चोरहरु पक्रियौं ।
ललितपुरबाट मूर्ति धुलिखेल पुर्‍याएरबापत ट्याक्सी भाडा मात्रै ३५ हजार रुपैयाँ लिएको थियो । पछि हामीले ट्याक्सरी चालकलाई समेत पक्रियौं ।
अपराध हुनै नदिनका लागि तपाईहरुको कारबाही चाहिँ कस्तो छ त ?
अपराध गर्ने अवसर दिनु भएन । त्यसका लागि प्रहरीले गतिविधि गरिरहेको छ । प्रहरीले अपराध प्रकृतिका मान्छेलाई डोमिनेशन गर्न आफ्नोे युनिफर्म लगाएर शो अप गर्नु पर्‍यो, त्यो हामीले गरिरहेका छौं । बर्दी शो अप गरेपछि बदमासीले टाउको उठाउन पाउँदैनन् । सिभिल गस्तीमा पनि हामी यतिनै मात्रामा पोख्त छौं । सिआरभी, क्वीक रेस्पोन्स टिम लगायतबाट हामीले गस्ती गरेकाले अपराध कम हुन सकेको छ ।
अन्त्यमा तपाईंलाई केही भन्नु छ ?
अपराध भइसकेपछि विभिन्न मान्छेले विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गर्ने र प्रहरीले अपराधीलाई छोडिदिन्छ भन्ने खालका कुराहरु पनि हुन्छन् । तर त्यस्तो होइन ।
प्रहरीले अपराधीलाई कारबाही गर्छ । विगतमा पनि गरेको हो र अहिले पनि गरिराखेकै छ । त्यसकारण अपराध भएपछि विभिन्न कुराका पछि नलागी प्रहरीसमक्ष उजुरी गर्नुस् । दोषीले कारबाही भोग्छ । ढुक्क हुनुस् उजुरी गर्नुस् ।